Ọtụtụ puku ndị mmadụ nọ na Dam Square kwụrụ George Floyd ngagharị iwe ma ọ bụ oge ọ bụla maka onye ọ bụla amaghị? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 2 June 2020	• 16 Comments
Ngagharị iwe ahụ ụnyaahụ na Dam na Amsterdam dị ka ọmụmaatụ nke ngosipụta akwụ ụgwọ nke steeti site na ọrụ ọgụgụ isi ya Inoffizieller Mitarbeiter goro ọrụ. Ruo ọnwa ugbu a, ọ dịghị onye Dutch na-ere ọkụ n'ihu iguzogide ihe mgbochi coronavirus dị ka mkpọchi na otu mita na ọkara, mana maka onye isi ojii America (onye ọ bụla amaghị), Aha ya bụ George Floyd, ọtụtụ puku mmadụ na - agbaso Black Live Matters (BLM) na imegide oke ndị uwe ojii.
Ọ bụ ihe ịtụnanya na onye isi obodo (ntakịrị ịchị ọchị) Femke Halsema nọ ya na-enweghị ihe nkpuchi na mbara ihu ahụ ma kagburu mmachibido nke nzukọ. E kwere ka Femke mee swish ya Na 1 mana ọ bịara kọwaara ya na ya atụghị anya ihe a niile. E nyekwara onye na-eme ihe nkiri VVD Klaas Dijkhof ikike itu egwu megide ya site n'ikwu na ndị ngagharị iwe sonyere ndị ahụ ozugbo. GGD kwesịrị ịkọmaka na ndị ahụ na-atụzi bọmbụ corona oge.
N'ihe banyere m, ngagharị iwe a na Dam Square ụnyaahụ gosipụtara mmadụ ole nọ na akpa ọrụ ahụ yana ndị na-akpata obere ego. N'okpuru Stasi na GDR mbu, ha kpọrọ ya Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers). Ndị ahụ bụ ndị mmadụ na - akwụ ụgwọ nzuzo na steeti ma dịkwa mfe ịkpọ oku maka ihe ngosi ma ọ bụ "zoo onye agbata obi gị."
Ihe adịghị mma ebe a. Amamihe adịghị. Gaghị enweta puku mmadụ puku ise na anọ maka ihe mere n'otu ebe na US, nke enweghị ihe ọ bụla gbasara ya na Netherlands. Na mberede, anyị nwere ọtụtụ puku ndị na-eso Black Lives Matter? Mee ka ndi isi ojii a mara ihe. Ee, ama m na, ndị uwe ojii gbagburu Mitch Henriquez afọ 5 gara aga, mana anyị emejughi dam na ya afọ 5 gara aga (n'oge ahụ naanị Nwoke 150). Ndị Dutch anaghị adị mfe mkpali maka ngosipụta. Ọ na - eme ya ma ọ bụrụ na ọ na - eweta ego n'akpa uwe. A na-aghọ gị aghụghọ!
Nanị ụzọ ga-esi n'ụzọ aghụghọ na aghụghọ nke steeti na mgbasa ozi bụ ọchịchị onye kwuo uche ya. Lelee www.fvvd.nl
Ihe ndekọ njikọ njikọ: npo.nl, hartvannederland.nl, socialisme.nu
Tags: Amsterdam, nwa, BLM, mmiri e gbochiri egbochi, ngosipụta, Femke, Floyd, George, Halsema, Inoffizieller, Lives, okwu, ọrụ
2 June 2020 na 07: 35
Emeela oku iji kpuchido ihu (ọ bụghị ihe mkpuchi)
Femme H na-ekwu (n'enweghị ikpe ọ bụla na ikpe enyerela n'okwu George Floyd)
- Enweghị ihe kpatara ya (ala) itinye aka, echiche dị mkpa, ha ha
- Ndi mmadu kwesiri iwere ibu ha? (Nke a ga - abụ mkpebi iwu ọhụụ ma ọ bụrụ na ndị uwe ojii na - agwa gị ihe dịka 1,5mtr (anyị na - ebu ọrụ nke anyị !!!)
Ndị nọ na ngosi ahụ juputara na eserese ahụ, mana ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ejighị ihe nkpuchi na mkpuchi anya kpuchie ya (yabụ na nchekwa ihu zuru oke), AT5 enyela ntakịrị ihe ngosi nke ndị na-egosi ndị na-ege ntị, a na-ahụkarị!
2 June 2020 na 08: 34
Otu nwa agbọghọ na Facebook na-achọ ime ka m kwenye na ngagharị iwe ahụ bụ eziokwu kpam kpam na ya na ndị enyi ya na-eme nke a n'ihi na ha na-emegide ịkpa ókè agbụrụ na ịgba ohu site na nchịkwa ndị ọcha. Mgbe ọ na-amalite ikwu banyere ọrụ ya wee kwute na mberede a chụọla ya, m na-arịọ, ọ dara.
Ndị IMBers… kwụrụ ndị ọrụ ụgwọ ọrụ na-enyocha mkparịta ụka nke ndị na-elekọta mmadụ na onye enwere ike iji maka ngosi
Ihe njirimara maka ndị otu IMB nke ndị agha mgbasa ozi na-elekọta mmadụ bụ na ha na-agba mbọ itinye mmụọ n'anyịnya ibu gị oge niile. "Ahụrụ m gị n'anya", "Agụrụ m akwụkwọ gị" ma ọ bụ "Ana m ekwenyekarị na gị" ..
2 June 2020 na 08: 38
Ọ bụrụ n’ịnọgide na-ajụ (maka na ọ na-emegiderịta onwe ya n'ihe ọ na-ekwu, ya bụ, mbụ ọ bụ onye ọrụ na-elekọta mmadụ, ewee chụọ ya n'ọrụ), mgbe ahụ ha ga-akwụsị.
Ekwela ka ndị agha ụgwọ nke ndị mgbasa ozi mgbasa ozi kwenye gị! IMB'ers: Inoffizieller Mitarbeiter.
Nkọwa Facebook nke nwanyị a kwuru na ọ ka na-arụrụ obodo Rotterdam ọrụ. Aghọtaghị m na a chụrụ ya n'ọrụ n'oge nsogbu Corona na ọ bụ ihe ijuanya na ọ ga-ahapụ ajụjụ ahụ. Dịka m siri chee, IMB'er doro anya. Atụmatụ afọ: gbara afọ iri abụọ
2 June 2020 na 09: 04
Ogbenye Paul Witteman, ugbu a ka m ghọtara ihe mere Jeroen Pauw ji mee naanị ya 😉
2 June 2020 na 12: 25
Martin, echefula ma lelee ọsọ nke nzukọ nke NGO dị ka Open Society Foundation, Mpụpụ Mmebi wdg. Ha na-ejikarị ọwa ọhụụ dịka mgbaàmà iji hazie.
Halsema bụ ezigbo enyi nke gangster slut Wisse Smit nke enwere ike jikọta ya na onye a na-enyo enyo na mbụ na onye otu sorosra soros.
2 June 2020 na 12: 35
N'ezie. Obi abụọ adịghị ya, ịkwụ ụgwọ n'akpa uwe ndị uwe ojii, dịka ọmụmaatụ, ndị na-eme ngagharị iwe Antifa anaghị agabiga akaụntụ akụ nke ụlọ ọrụ ahụ, mana ọ gaghị eju m anya ma ọ bụrụ na ministri ahụ nwekwara akaụntụ nnabata maka Inoffizieller Mitarbeiter.
2 June 2020 na 13: 03
nke ahụ karịrị esemokwu, ahụrụ m ụdị steeti ahụ dịka ihu ma ọ bụ. mgbidi mkpu arịrị maka ụmụ amaala na-amaghị ihe. Na-esote nke a, ndị agha gbara ọchịchịrị na-abanye n'ime ibe ha na ndị a na-echekarị na-arụkọ ọrụ ọnụ.
Akuko mbu banyere uzo nsogbu / mmeghachi omume / osisa a na-agbadogharia n’ime usoro mgbasa nke ngwo:
Grapperhaus na mat Room mgbe ngosipụta Amsterdam
Mkpesa mkpesa dị nso, a na-eleghara usoro iwu anya. Madurodam gosiputara ezigbo ihu ya ..
2 June 2020 na 13: 11
lee bilderberger ọzọ
Aboutaleb: 'Ihe ngosi mmadụ Rotterdam agaghị eso ya karịa mmadụ iri asatọ'
2 June 2020 na 13: 16
Ọ bụrụ n’ịlele ihe ndekọ Op1 site n’abali ụnyaahụ, Halsema ga-agbagọ agbagọ ma kpara nkata ma onye ọ bụla nwere ike dọsịa tiketi ọ bụla metụtara nzukọ otu ma ọ bụ ndọrọndọrọ ọchịchị. Lelee site na 9:10 min.
Ọ na-ekwu ebe ahụ na ya enweghị ike ime ihe ọ bụla megide ngosi a n'agbanyeghị na ọ bụ iwu obodo. N'ezie, ọ na-ekwudị na ikike adịghị mkpa. Yabụ na Aboutaleb nwekwara ike ịkwakọ. N’ezie, etinyela akwụkwọ ọzọ maka ikike maka ngosipụta.
Mana nke ahụ amaraworị .. igwe okwu ahụ amaghị
2 June 2020 na 13: 13
Akụkọ adịghị mma banyere Femke (onye isi) Halsema na Op1 na-atụ anya na ọ bụ naanị ụmụ nwoke ole na ole nakwa na ya na ndị uwe ojii na-emekọrịta ihe n'oge awa ọ bụla na ngụkọta ahụ erutaghị maka nnabata nke iji nnukwu data. Ha enweela nnukwu data ahụ ogologo oge, ha nwere ike ịhụ nke ọma onye na-eme atụmatụ ebe ọ ga-aga. Maka nke ahụ ha agaghị aga eleta ndị otu Facebook na ndị ọrụ ole na ole n'azụ PC. A na-eme nke a site na edemede AI.
Halsema na ngagharị iwe (Inoffizieller Mitarbeiter) na Dam Square emegheere ọnụ ụzọ maka nnabata nke nkwado iwu nke gọọmentị na-anakwere nchịkọta data.
2 June 2020 na 13: 19
Ha nwere ike ibu ụzọ mee nke ahụ site na iwu ịdọta ego Trollongren, ọ bụ naanị na ha chọrọ ebumnobi ziri ezi iji resị ya atụrụ.
2 June 2020 na 14: 31
mgbe ahụ na-achọ nzuzu na ha chọrọ ndị BOA nwere obere ọrụ ka ha rụọ ọrụ ruru unyi. Ihe nnabata chọrọ m dịkwa ntakịrị karịa ọkwa LTS ochie, n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ ụmụ nwoke ha na-enweghị n'ụlọ ọrụ iji dozie “nsogbu” a.
The BOA (🐍) ya na chess motif Sturmabteilung ohuru ??
5 June 2020 na 14: 53
ọ bụ otu a ka ọ si arụ ọrụ ..
5 June 2020 na 18: 15
ndị nzuzu dị mma ugbu a nwere ụtọ maka ya
Boas nweta batons: 'Ugbu a, m nwere ike ime ka ndị mmadụ nọrọ jụụ'
2 June 2020 na 15: 06
Google maka nke a ”Chauvin na Floyd rụrụ ọrụ dị ka ndị nche n'otu ụlọ oriri na ọ /ụ /ụ / ụlọ oriri abalị, El Nuevo Rodeo, nke otu nwanyị aha ya bụ Maya Santamaria nwere. Ọ rere ebe ahụ ọnwa abụọ gara aga. ”
Ha maara ibe ha. Hoax.
Fleur dere, sị:
3 June 2020 na 20: 20
" Ndị uwe ojii ogbugbu mmadụ na Minneapolis George Floyd iji wepụta agha obodo?
Femke Halsema na-eme ngosipụta na-enweghị ikikere ngbasa iwu & otu yana 1,5 m na-emegodi ihe mmekọrịta mmadụ na ibe ya »
Nleta ha: 4.173.864